Sarotra ny rariny ho an’ilay mpanangom-baovao Kolombiana indizeny nisy namono · Global Voices teny Malagasy
Nosokajiana ho famonoana olona ny famonoana azy fa tsy heloka bevava atao amin’ny mpanao gazety
MpanoratraJ. Fernanda Sánchez Jaramillo
Voadika ny 11 Janoary 2022 5:36 GMT
Sary nataon'i Rowena Neme ho an'ny Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), nahazoana alalana.
Fanamarihan'ny mpanitsy lahatsoratra: ity tatitra ity no farany amin'ny fitantarana mivelatra kokoa momba ny fandrahonana ireo mpitati-baovao indizeny ao Cauca (Kolombia).
Mbola tsaroana foana ao am-pon'ny vondrom-piarahamonina niaviany, ny vahoaka Nasa, ny famonoana an'i José Abelardo Liz, ilay mpitati-baovao indizeny sady mpiambina indizeny. Ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy, nanampy tamin'ny fiarovana ny tanin-drazany tao Corinto, Cauca izy, any amin'ny faritra atsimon'i Kolombia, faritra ravan'ny ady mitam-piadian’i Kolombia. Nosokajian'ny manampahefana Kolombiana ho toy ny famonoana olona fa tsy ho heloka bevava atao amin'ny mpanao gazety ny famonoana azy.
Nicolás Guerrero, manampahefanan'ny razambe Nasa. Sary avy amin'i Willian Mavisoy, nahazoana alalana.
Taona vitsy lasa izay, nanatevin-daharana ny onjam-peo Nasa i Abelardo izay nanaovany fiofanana maromaro mba ho anisan'ny taranaka mpampita vaovao indizeny ao amin'ny tanàna voatokana Corinto. Tsaroan'i Wilmar Mosquera sy Natalia Salazar ny toe-tsainy lehibe amin'ny fanatontosana asa.
Tamin'ny 13 aogositra 2020, nangataka azy i Wilmar mpiara-miasa aminy mba hitatitra momba ny minga, hetsika iraisana tarihin'ny vondrom-piarahamonina miaro ny lohahevitra ara-piarahamonina, hanafahana ny Tany Reny (Mpamelona), ary ny fomba fihetsiky ny vondrona miady amin'ny korontana ao Kolombia (Esmad, amin'ny fanafohezan-teny amin'ny teny Espaniola) manoloana ny fiarahamonina.
Araka ny filazan'ny Filankevi-paritry ny Indizeny ao Cauca, izay fikambanan'ny manampahefana Indizeny (Cric, amin'ny fanafohezan-teny espaniola), andraikitra ara-panahy mikendry ny hiaro ny tany avy amin'ireo mpisehatra ara-tsosialy izay miteraka tsy firindrana, toy ny mpiady anaty akata, ny andiana milisy, ny mpitandro ny filaminana, ny mpamboly voly tokana, sy ny sisa , ankoatra ny zavatra hafa, ny “fanafahana ny Tany Reny (Mpamelona).”
Tao Corinto, efa nanomboka enin-taona lasa izay ny hetsika hanafahana ny Tany Reny Mpamelona, hoy ny tompon'andraikitra ara-drazana Nicolás Guerrero tamin'ny Global Voices. Nanomboka teo dia olona miisa enina avy amin’ny Nasa no maty, anisan'izany i Abelardo. Norahonana ny olona hafa ao amin'ny Nasa satria tsy mamela ireo mpisehatra tsy ara-dalàna hifehy ny tanin-drazana izay nalaina tamin'ny razambeny izy ireo. Mety ho vidina lafo ny fiarovana ny Tany Reny Mpamelona.
Abelardo Liz ao amin'ny Radio Nasa Nation. Sary avy amin'i Natalia Salazar, nahazoana alalana.
Nisy nitifitra teo ampandraketana ny fokonolony miaro ny tanin'ny razamben’ny indizeny i Abelardo. Nihevitra i Wilmar namany rehefa naharay hafatra momba ny ratra nahazo an'i Abelardo fa tsy mampanahy izany ary nihevitra izy fa lehibe afaka ny hivazivazy momba izany aza any aoriana any.
Rehefa tonga tany amin’i Abelardo, anefa, i Wilmar, dia tsapany ny tahotra nahazo azy raha nilaza i Abelardo hoe: “Aza avela ho faty aho!” Niantso vonjy ny mpikambana ao amin’ny vondrom-piarahamonina, ​​saingy nosakanan’ny polisy sy ny Esmad ny fifamoivoizana. Nitovy tamin'izany ny olana nitranga tamin'ny famonoana ilay mpitati-baovao indizeny iray hafa Efigenia Vásquez.
Telopolo minitra taorian’izay, tonga ny fiara nitondra an’i Abelardo nankany amin’ny hopitaly any Cali, tokony ho adiny roa sy sasany miala an’i Corinto. Indrisy anefa fa tara loatra. Maty nandritra ny dia izy.
Fahafatesana sy tsimatimanota
Nilaza tamin'ny Global Voices i Angela Caro, mpisolovava avy amin'ny Orina Mpanasoa ho an’ny Fahalalahana An-gazety (FLIP, fanafohezan-teny espaniola), fa tsy misy ny fahazoana rariny amin'ity raharaha ity. Nilaza izy fa “mitsara” ity raharaha ity hankany amin’ny tsimatimanota ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Kolombia satria tsy nanaraka ny fenitra momba ny heloka bevava atao amin'ny mpanao gazety ny fanadihadiana. Noraisina ho toy ny heloka bevava mahazatra anefa izany. Tsy mihevitra ny toeran’i Abelardo ho mpitati-baovao ny Mpampanoa Lalàna.
Nanolo-tena ho amin'ny fifandraisana indizeny i Abelardo na dia teo aza ny loza atrehany amin'ny fanomezana vaovao ireo vondrom-piarahamonina misy azy. Resy lahatra amin’ny maha zava-dehibe ny fifandraisana avy amin’ny tany tiany ho afaka ireo mpitati-baovao indizeny toa azy.
Kitro ifaharana ho an’ny vahoaka indizeny ny mpitati-baovao indizeny ary manaiky izany ny manampahefana ara-drazana. Hoy i Nicolás Guerrero hoe:
They allow a permanent communication with the community and make visible the processes we carry out as an organization. They reach out to the territories, to the community members while they work and inform them about what the authorities are doing, so that they arrive informed when they attend an assembly.
Mamela fifandraisana maharitra amin'ny vondrom-piarahamonina izy ireo ary mahatonga ho hita ny paika ataonay amin'ny maha-fikambanana anay. Tonga eny amin’ny zaratanya sy ny mpiara-monina izy ireo rehefa miasa, ary mampahafantatra azy ireo izay ataon’ny manam-pahefana, mba hahafahan’izy ireo mahara-baovao rehefa manatrika fivoriambe.
Mpiambina indizeny ihany koa i Abelardo izay niaro ny tany tsy manam-pitaovam-piadiana. Ho an’ny mpikambana ao amin’ny vondrom-piarahamoniny, nandray anjara hatrany tamin’ny faritaniny izy ary niaro ny zon’ny vahoaka. Lehilahy tsy dia lava loatra izy fa be fitiavana, ary nankasitrahan’ny vondrom-piarahamonina misy azy ny fanetren-tenany.
Nampanginina ny feon'i Abelardo, saingy mbola velona eo anivon'ireo mpiara-miasa aminy ny fahatsiarovana azy.
Natalia Salazar sy Wilmar ao amin'ny onjam-peo Nasa. Sary avy amin'i Willian Mavisoy, nahazoana alalana.
Nanazava i Wilmar, avy ao amin'ny Radio Nasa Nation sady mpiara-miasa amin'i Abelardo teo aloha, hoe:
As young people who like communication, we do it out of passion. It comes naturally to us. We are not afraid. We are aware of what can happen, and the community is aware of what we do.
Amin'ny maha-tanora tia fifandraisana anay, manao izany ivelan'ny fatratra izahay. Tonga ho azy ato aminay izany. Tsy matahotra izahay. Fantatray ny mety hitranga, ary fantatry ny vondrom-piarahamonina ny ataonay.
Natalia Salazar sy Wilmar tao amin’ny onjam-peo tany Corinto (Cauca). Sary avy amin'i Willian Mavisoy, nahazoana alalana.
Nilaza i Natalia Salazar, mpiara-miasa iray hafa, fa tsy safidy ny miala amin'ity asa ity. Nohamafisiny fa ilaina ny fifandraisana Indizeny mba hifanandrinana amin'ny fitantaran’ny mpanao gazety avy amin'ny fampitam-baovao ivelany izay manome vaovao diso momba ny vahoakany.
“They do not know what happens in our communities nor do they know that we do our own communication work. It is important to express within our own communication channels, through the radio station, what is really happening, the voices of the communities that live in midst of disharmony, armed conflict and violence [committed] by other entities. It is worthwhile to strengthen our own and alternative communication, to continue creating these links between other communities and peoples to make known what is happening in ancestral territories, to confront and mitigate the impact of the war.
“Tsy fantatr’izy ireo ny zava-mitranga eo anivon’ny vondrom-piarahamonina misy anay ary tsy fantany fa manana fomba fiasa manokana amin’ny fampitana vaovao izahay. Zava-dehibe ny maneho hevitra ao anatin’ny fantsom-pifandraisanay manokana, amin’ny alalan’ny onjam-peo, amin'izay tena zava-mitranga, ny feon’ireo vondrom-piarahamonina miaina eo anivon'ny korontana, ady mitam-piadiana ary ny herisetra [nataon'ny] sampana hafa. Mendrika ny hamafisina ny fifandraisanay hafa mahasolo toerana, mba hitohizan'ny famoronana ireo rohy eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny vahoaka hafa mba hampahafantarana ny zava-mitranga any amin'ny zaratany ara-drazana, hiatrehana sy hanalefahana ny fiantraikan'ny ady.
Ity no farany amin'ireo tantara dimy momba ny heloka bevava atao amin'ny mpanao gazety ao Kolombia, indrindra fa ireo mpitati-baovao Indizeny ao amin'ny faritanin'i Cauca, tohanan'ny Justice for Journalists Foundation (JFJ), fikambanana tsy miankina any Londres. Manome famatsiam-bola ny fanadihadiana amin’ny asa fanaovan-gazety ny JFJ amin’ny heloka herisetra atao amin'ny mpiasan’ny fampitam-baovao sy manampy ny mpanao gazety matihanina sy ny olon-tsotra mba hanalefahana ny loza mitatao.
Mitatitra ny tsy fanasaziana ny heloka bevava atao amin'ny mpitati-baovao ny tantara voalohany, ary ny faharoa, ny resaka momba ny vahoaka indizeny sy ny tolona ataon'izy ireo amin'ny fitaterana vaovao ho an’ny vondrom-piarahamonina momba ny ady tany; ny fahatelo, ny famonoana an'i María Efigenia, indizeny Kokonuco mpampita vaovao; ny fahaefatra, ny famonoana an'i Eider Arely, indizeny Nasa mpampita vaovao sady mpiambina indizeny ao Caldono (Cauca).